Asetenam Nsɛm: Yehui Sɛ Biribiara a Yehowa Bɛka Sɛ Yɛnyɛ No Ɛsɛ Sɛ Yegye Tom
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chiga Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fante Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guianese Creole Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lendu Lenje Lhukonzo Liberian English Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Min Nan (Taiwan) Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicobarese Nigerian Sign Language Niuean Norwegian Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Phimbi Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Romania) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Songomeno South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tamil (Roman) Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Tewe Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Yehui Sɛ Biribiara a Yehowa Bɛka Sɛ Yɛnyɛ No Ɛsɛ Sɛ Yegye Tom
KATHLEEN LOGAN ANOM ASƐM
OSU ne mframa kɛse a ɛbɔe no twee atɛkyɛ ne abo akɛse beguu asubɔnten no mu, na na nsu no rebu fa so. Ná ɛsɛ sɛ yetwa nsu no, nanso na nsu a ɛrebu fa so no ama breegye no asɛe. Wei nti me ne me kunu Harvey ne nea na ɔkyerɛ Amis kasa ase ma yɛn no, yɛn nyinaa bɔɔ hu, na na yenhu nea yɛnyɛ. Bere a anuanom a wogyina asuogya hɔ de ayamhyehye rehwɛ nea yɛbɛyɛ no, yefii ase twaa nsu no. Yedii kan de yɛn kar sii kar kɛse bi akyi. Afei kar kɛse no de nkakrankakra tew sii nsu a na ɛrebu fa so no mu. Nanso na yɛmfaa nhama anaa nnade biara nsoo yɛn kar no mu mmɔɔ kar kɛse no mu. Ná ayɛ te sɛ nea yennu da, nanso yekoduu asomdwoe mu. Saa bere no nyinaa na yɛrebɔ Yehowa mpae. Saa asɛm no sii afe 1971. Ná yɛwɔ Taiwan apuei fam mpoano, na na ɛhɔ ne yɛn kurom twe yiye. Ma menka yɛn asetenam asɛm nkyerɛ wo.
NEA ƐYƐE A YENYAA ƆDƆ MAA YEHOWA
Harvey ne ne nuanom yɛ mmarima nnan, na ɔno na ɔyɛ panyin. N’abusuafo baa nokware no mu wɔ Midland Junction a ɛwɔ Australia atɔe fam no. Ná ɛyɛ afe 1930 mu hɔ baabi. Saa bere no, na sika ho yɛ den paa wɔ ɔman no mu. Harvey renyin no, onyaa ɔdɔ kɛse maa Yehowa, na odii mfe 14 no, ɔbɔɔ asu. Ankyɛ na obehui sɛ, asafo no mu dwumadi biara a wɔde bɛma no no, ɛsɛ sɛ ogye tom. Bere a na ɔyɛ abarimaa no, da bi wɔka kyerɛɛ no sɛ ɔnkenkan Ɔwɛn-Aban wɔ asafo nhyiam ase, nanso n’adwene yɛɛ no sɛ ɔrentumi nkenkan no yiye, enti wankan. Onua a na ɔne Harvey rekasa no ka kyerɛɛ no sɛ, “Sɛ obi a ɔwɔ Yehowa ahyehyɛde no mu ka kyerɛ wo sɛ yɛ biribi a, ɛkyerɛ sɛ onim sɛ wubetumi ayɛ!”​—2 Kor. 3:5.
Me ne me maame ne me nuabea panyin nyinaa baa nokware no mu wɔ England. Akyiri yi koraa na me papa baa nokware no mu efisɛ kan no, na ɔsɔre tia Yehowa Adansefo. Bere a mereyɛ adi mfe du no, na me papa ani nnye ho de, nanso mebɔɔ asu. Mede yɛɛ me botae sɛ mɛyɛ ɔkwampaefo na matoa so akɔyɛ ɔsɛmpatrɛwni. Nanso me papa kaa sɛ, sɛ minnii mfe 21 a, ɔremma menyɛ akwampae adwuma no. Ná menyɛɛ m’adwene sɛ mɛtwɛn akyɛ saa. Ne nyinaa mu no, bere a midii mfe 16 pɛ na ɔpenee so ma mekɔtenaa me nuabea panyin a na watu akɔtena Australia no nkyɛn. Na bere a midii mfe 18 no, mebɛyɛɛ ɔkwampaefo.
Afe 1951 da a yɛwaree
Australia na mikohyiaa Harvey. Ná yɛn nyinaa ani gye ho sɛ yɛbɛyɛ asɛmpatrɛwfo wɔ Yehowa som mu. Afe 1951 na yɛwaree. Bere a yɛbɔɔ mu yɛɛ akwampae adwuma no mfe mmienu no, wɔka kyerɛɛ yɛn sɛ yɛnkɔyɛ ɔmansin adwuma. Ɔmansin a yɛkɔyɛɛ mu adwuma no, na ɛso paa, na na ɛwɔ Australia atɔe fam. Ná yɛde kar twa kwantenten kɔ akyirikyiri kɔfa mmeae a ɛhɔ ayɛ sɛ sare so.
YƐN ANIDASO NO BAA MU
Afe 1955 da a yewiee Gilead sukuu wɔ Yankee Stadium
Afe 1954 no, wɔfrɛɛ yɛn kɔɔ Gilead adesuakuw a ɛto so 25 no bi. Botae a yɛde sii yɛn ani so sɛ yɛbɛyɛ asɛmpatrɛwfo no, na aba mu ara ne sa! Yɛde po so hyɛn na ɛkɔɔ New York, na yefii ase suaa Bible no kɔɔ akyiri paa. Nneɛma a na ɛsɛ sɛ yesua wɔ Gilead sukuu no, ebi ne Spanish kasa, na na ɛyɛ den ma Harvey efisɛ na n’ano ntumi mfa “r” a ɛwɔ Spanish kasa mu no.
Sukuu no rekɔ so no, akyerɛkyerɛfo no de too gua sɛ, obiara a n’ani gye ho sɛ wɔma no dwumadi wɔ Japan no, ɔnkɔkyerɛw ne din na wɔnkyerɛ no Japanese kasa. Yɛyɛɛ yɛn adwene sɛ yɛbɛma Yehowa ahyehyɛde no akyerɛ yɛn baabi a yɛbɛkɔ. Ankyɛ koraa na Albert Schroeder a ɔka Gilead akyerɛkyerɛfo no ho no hui sɛ yɛnkyerɛw yɛn din. Enti ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ: “Munnwen asɛm no ho bio.” Bere a Onua Schroeder hui sɛ yɛda so retwentwɛn yɛn nan ase no, ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ: “Me ne akyerɛkyerɛfo a aka no akyerɛw mo din. Monhwɛ sɛ Japanese kasa bɛyɛ mmerɛw ama mo anaa.” Japanese kasa no de, Harvey tumi suae.
Yekoduu Japan afe 1955. Saa bere no, na adawurubɔfo a wɔwɔ ɔman no nyinaa mu yɛ 500. Ná Harvey adi mfe 26, na na me nso madi mfe 24. Wɔde yɛn kɔɔ Kobe, kurow a po so hyɛn gyina hɔ no, na yɛkaa asɛmpa no wɔ hɔ mfe nnan. Yɛn ani gyei sɛ wɔkaa sɛ yɛnsan nkɔyɛ ɔmansin adwuma no bio, na baabi a yɛkɔsomee no, na ɛbɛn Nagoya kurow no. Yɛn adwuma no ho biribiara maa yɛn ani gyei. Anuanom a wɔwɔ hɔ, ɛhɔ aduan, ne sɛnea na ɛhɔ yɛ fɛ no, ne nyinaa maa yɛn ani gyei. Nanso ankyɛ koraa na yenyaa hokwan foforo a ɛno nso ma yegyee nea Yehowa kae no toom.
DWUMADI FOFORO DE ƆHAW AFOFORO BAE
Me ne Harvey ne asɛmpatrɛwfo afoforo wɔ Kobe, Japan, afe 1957
Bere a yɛyɛɛ ɔmansin adwuma mfe mmiɛnsa no, Japan baa dwumadibea no bisaa yɛn sɛ yɛn ani begye ho sɛ yɛbɛkɔ Taiwan akɔka asɛmpa no wɔ Amisfo mu anaa. Ná anuanom a ɛwɔ hɔ no bi abɛyɛ awaefo. Enti na Taiwan baa dwumadibea no repɛ onua bi a ɔte Japanese kasa no yiye ama wakodi asɛm no ho dwuma. * Ná yɛn ani gye adwuma a yɛreyɛ wɔ Japan no ho paa, enti na ayɛ den ama yɛn sɛ yebesi gyinae. Nanso na Harvey abehu sɛ, sɛ wɔma no dwumadi a, ɛnsɛ sɛ ɔpopo ne ti, enti yegye toom sɛ yɛbɛkɔ.
Yekoduu Taiwan November, afe 1962. Ná adawurubɔfo 2,271 na ɛwɔ hɔ, na na wɔn mu dodow no ara yɛ Amisfo. Nanso na ɛsɛ sɛ yedi kan sua Chinese kasa. Nhoma baako pɛ na na yɛde sua kasa no, na na tikyani no nso nte Borɔfo. Nanso yesuae.
Bere a yekoduu Taiwan no, ankyɛ koraa na wɔkaa sɛ Harvey nhwɛ Taiwan baa dwumadibea no so. Ná baa dwumadibea hɔ sua, enti na Harvey tumi yɛ ɛhɔ adwuma no san nya bɛyɛ nnawɔtwe mmiɛnsa de som anuanom a wɔka Amis kasa no bosome biara. Ɛtɔ da bi nso a, na ɔsom sɛ ɔmantam sohwɛfo. Ɛno nti, na ɔma ɔkasa ahorow wɔ nhyiam ase. Na anka Harvey betumi ama ɔkasa ahorow no wɔ Japanese kasa mu ama anuanom a wɔyɛ Amisfo no ate ase. Nanso Chinese kasa nko ara na na aban no apene so sɛ ɔsom biara mfa nyɛ nhyiam. Enti ɛwom sɛ na Harvey nnya ntee Chinese kasa no papa, nanso omiaa n’ani de maa ɔkasa ahorow no maa onua bi kyerɛɛ ase kɔɔ Amis kasa mu.
Saa bere no, asogyafo na na edi Taiwan man no so, enti na ɛsɛ sɛ anuanom kogye tumi krataa ansa na wɔatumi ayɛ nhyiam. Ná ɛkyɛ ansa na wɔapene so sɛ wɔmfa tumi krataa no mma yɛn. Sɛ wɔpene so wie nso a, na polisifo no mfa mma yɛn ntɛm. Sɛ edu nnawɔtwe a yɛrebɛyɛ nhyiam no na polisifo no mfaa krataa no mmaa yɛn a, na Harvey kɔtena wɔn so wɔ wɔn adwumam kosi sɛ wɔde bɛma no. Ná ɛyɛ polisifo no aniwu sɛ obi a omfi ɔman no mu bɛba abegyina wɔn so wɔ adwumam hɔ. Enti ɔkɔ a, ɛnkyɛ koraa na wɔde ama no.
BERE A EDI KAN A MEFOROO BEPƆW
Yɛretwa nsu bi a emu nnɔ wɔ Taiwan akɔ asɛnka
Nnawɔtwe mmiɛnsa a na yɛne anuanom no de yɛ asɛnka adwuma no, na yɛnantew bɛyɛ dɔnhwerew baako ne akyi ansa na yɛadu baabi a yɛrekɔ no. Ná yɛforo mmepɔw, na na yetwa nsu nso. Mekae bere a edi kan a meforoo bepɔw. Bere a yɛpɛɛ biribi kakra di wiei ara na yɛkɔforoo bɔs anɔpa 5:30, na yetwaa kwan kɔɔ akuraa bi ase. Yetwaa nsu kɛse bi, ɛnna yɛkɔforoo bepɔw tenteenten bi nso. Ná bepɔw no si hɔ, enti sɛ mema m’ani so a, na asɛ onua a odi m’anim no nan rebetia m’anim.
Saa anɔpa no, Harvey ne anuanom a wofi hɔ no na ɛkɔɔ asɛnka, ɛnna me nko ara meyɛɛ asɛnka adwuma no wɔ akuraa ketewa bi ase. Ná ɛhɔfo no ka Japanese kasa. Ɛbɔɔ bɛyɛ awia dɔn ko no, na mididii akyɛ, enti na ɔkɔm ama mayɛ hagyaa. Bere a yɛpɔn asɛnka a mikohyiaa Harvey no, na anuanom no nyinaa kɔ. Ná Harvey de nsɛmma nhoma ama obi de agye akokɔ nkosua mmiɛnsa. Ɔkyerɛɛ me sɛnea yedi kosua mono. Ɔbɔɔ ano ne to maa tokuru kakra bɛdaa hɔ, ɛnna ɔde n’ano twee. Ná ɛnyɛ me akɔnnɔ de, nanso mimiaa m’ani nom baako. Afei hena na na ɔbɛfa kosua a aka no? Me na mefae efisɛ, sɛ mannom na sɛ ɔkɔm ma mitwa hwe a, na Harvey rentumi mma me so mfa me nsian bepɔw no.
AGUARE A MINHUU BI DA
Bere bi, na yɛrebɛyɛ ɔmansin nhyiam, na biribi sii a na minhuu bi da. Yɛkɔtenaa onua bi fie wɔ Ahenni Asa no nkyɛn pɛɛ. Esiane sɛ na aguare ho hia Amisfo no paa nti, ɔmansin sohwɛfo yere no de nsu kosii hɔ maa yɛn sɛ yenkoguare. Ná Harvey reyɛ ade, enti ɔkaa sɛ minni kan nkoguare. Nneɛma mmiɛnsa na mekɔtoo sɛ esisi hɔ: bokiti baako a nsuonwini wom, baako a nsuɔhyew wom, ne ade kɛse bi a megyina mu aguare. Menkɔhwɛ a sɛɛ na ɔmansin sohwɛfo yere no de nneɛma no asisi abɔnten, baabi a obi wɔ Ahenni Asa no so a, obehu wo, na na anuanom bi nso reyɛ nhyiam no ho nneɛma bi wɔ Ahenni Asa no so. Mibisaa no sɛ menya biribi de akata hɔ anaa. Rɔba ntama bi na ɔkɔfa brɛɛ me. Wohwɛ mu a, wuhu biribiara! Meyɛɛ m’adwene sɛ mɛkɔ akɔhyɛ fie no akyi. Ɛhɔ nso, na dabodabo akɛse bi atwetwe wɔn ti abɛtɛw hɔ a sɛ mebɛn wɔn pii a, wɔbɛsɔw me. Ɛnna mekaa sɛ: ‘Sɛnea anuanom ani abere reyɛ adwuma no, wɔrenhu koraa sɛ migyina ha reguare. Manguare nso a, ɛbɛhaw wɔn. Aa, ma minguare ɛ!’ Enti miguaree saa ara.
Yɛhyɛ Amisfo ntaade
AMISFO NYAA NHOMA WƆ WƆN KUROM KASA MU
Harvey hui sɛ na anuanom a wɔyɛ Amisfo no ntumi nnya nkɔso ntɛmntɛm wɔ asafo no mu, efisɛ na wɔn mu bebree nnim akenkan na na wonni nhoma biara wɔ Amis kasa mu. Afei ara na na wɔafi ase rekyerɛw Amis kasa no, na Roman nkyerɛwde na na wɔde yɛ adwuma. Ɛno nti, na ntease wom sɛ yɛbɛkyerɛ anuanom no ama wɔatumi akenkan wɔn kurom kasa. Ná ɛnyɛ adwuma ketewa, nanso nkakrankakra afei de na anuanom no ara tumi sua ade. Afe 1960 mu hɔ baabi na Amisfo fii ase nyaa nhoma wɔ wɔn kasa mu, na afe 1968 na wonyaa Ɔwɛn-Aban wɔ Amis kasa mu.
Nanso na etia aban mmara sɛ wɔbɛkyekyɛ nhoma biara a enni Chinese kasa mu wɔ ɔman no mu. Nea ɛbɛyɛ na yɛannya asɛm no, yɛyɛɛ Amis Ɔwɛn-Aban no ahorow ahorow. Ebi ne sɛ, bere bi, Ɔwɛn-Aban a yɛde Mandarin (Chinese) ne Amis kasa ayɛ na na yɛde yɛ adwuma. Sɛ obi bisa ho asɛm a, na yɛkyerɛ no mu sɛ yɛrekyerɛ kurom hɔfo Chinese kasa. Efi saa bere no, Yehowa ahyehyɛde no ayɛ nhoma pii wɔ Amis kasa mu ama Amisfo no atumi asua nokware a ɛwɔ Bible mu no.​—Aso. 10:34, 35.
BERE A WƆDE TEW ASAFO NO HO
Afe 1960 ne afe 1970 mu hɔ no, na anuanom a wɔyɛ Amisfo no pii mfa Onyankopɔn mmara mmɔ wɔn bra. Esiane sɛ na wɔnte Bible nnyinasosɛm ase yiye nti, na ebinom bu brabɔne, ebi we nsa bo, na na ebinom nom tawa san we betel aba. Ná Harvey srasra asafo bebree sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛboa anuanom no ama wɔahu sɛnea Yehowa hu saa nneɛma no. Ɛyɛ bere a yɛrekɔsra asafo bi na asɛm a yɛkaa no mfiase no too yɛn.
Anuanom a wɔbrɛ wɔn ho ase no gye toom yɛɛ nsakrae, nanso awerɛhosɛm ne sɛ, bebree anyɛ. Mfe 20 ntam no, adawurubɔfo a wɔwɔ Taiwan a na wɔn dodow bɛboro 2,450 no, ɛso tew baa bɛyɛ 900. Ebuu yɛn abam paa. Nanso, na yenim sɛ Yehowa renhyira ahyehyɛde a ɛho ntew da. (2 Kor. 7:1) Afei de, suban bɔne a na ɛrekɔ so no nyinaa gyaee, na Yehowa adom so, adawurubɔfo bɛboro 11,000 na ɛwɔ Taiwan nnɛ.
Efi afe 1980 reba no, yehui sɛ anuanom a wɔwɔ Amis asafo ahorow mu no gyidi ayɛ den, na Harvey nyaa bere boaa wɔn a wɔka Chinese kasa no. Otumi boaa yɛn nuanom mmea pii kununom ma wɔbaa asafo no mu, na wei maa n’ani gyei. Mekae sɛ ɔkaa sɛ n’ani gyei paa bere a ohui sɛ mmarima no baako rebɔ Yehowa mpae bere a edi kan no. Me nso m’ani agye sɛ matumi akyerɛkyerɛ mmea bebree a wɔwɔ komapa ama wɔaba Yehowa nkyɛn. Obi a me ne no suaa Bible mpo, me ne ne ba barima ne ne babea yɛɛ adwuma wɔ Taiwan baa dwumadibea hɔ maa m’ani gyei.
ME KUNU WUI YAYAAYAW
Seesei de, me kunu nka me ho bio. Bere a yɛwaree bɛyɛ mfe 59 no, kokoram teetee me kunu Harvey, na owui January 1, 2010. Ná ɔde bɛyɛ mfe 60 ayɛ bere nyinaa som adwuma no! Ɛnnɛ nyinaa m’ani agyina no paa. Nanso ɛyɛ me dɛ paa sɛ mitumi boaa no ma ɔyɛɛ adwuma no saa bere no wɔ aman mmienu a emu yɛ anika mu! Yesuaa Asia kasa mmienu a ɛyɛ den, na Harvey de, osuaa ne kyerɛw mpo.
Owui no, ankyɛ na Akwankyerɛ Kuw no kaa sɛ, manyin, enti sɛ mesan kɔ Australia a ɛbɛboa me. Ade a edii kan baa me tirim ne sɛ, ‘Mempɛ sɛ mefi Taiwan.’ Nanso, na Harvey ama mahu sɛ, sɛ Yehowa ahyehyɛde no ka sɛ menyɛ biribi a, ɛsɛ sɛ migye tom, enti mekɔe. Akyiri yi mihui sɛ kɔ a mekɔe no, na eye.
Sɛ wɔn a wɔka Japanese ne Chinese kasa ba Betel a, ɛyɛ me dɛ sɛ saa kasa no a misuae nti, mitumi de wɔn kyinkyin hɔ
Seesei, mede Dwoda kosi Fida yɛ adwuma wɔ Australasia baa dwumadibea hɔ, na mede Memeneda ne Kwasida nso ne asafo bi kɔ asɛnka. Ne nyinaa akyi no, merehwɛ kwan denneennen sɛ owusɔre a wɔahyɛ ho bɔ no bɛba. Minim sɛ Yehowa bɛkae Harvey, efisɛ Harvey hui sɛ Yehowa ka sɛ yɛ biribi a, ɛsɛ sɛ wugye tom.​—Yoh. 5:28, 29.
^ nky. 14 Ɛwom sɛ seesei Chinese kasa na aban no apene so sɛ wɔmfa nyɛ adwuma wɔ Taiwan, nanso kan no Japanese kasa na na wɔde yɛ adwuma wɔ hɔ. Enti saa bere no, Japanese kasa na na mmusuakuw a ɛwɔ Taiwan no ka.
Share Share Yehui Sɛ Biribiara a Yehowa Bɛka Sɛ Yɛnyɛ No Ɛsɛ Sɛ Yegye Tom
w21 January kr. 26-30